Fantaro ny ‘Mpanonofy’ iray any Etazonia Nanomboka ny Orinasany Manokana Mba Hanentanana ny Olona Hifidy · Global Voices teny Malagasy
Fantaro ny ‘Mpanonofy’ iray any Etazonia Nanomboka ny Orinasany Manokana Mba Hanentanana ny Olona Hifidy
Voadika ny 01 Desambra 2016 10:13 GMT
Antonio Valdovinos, “Mpanonofy” izay nanomboka ny La Machine Field Operations, manandrana manentana ny olona hifidy. Sary: Natolotr'i Antonio Valdovinos
Ity tatitra ity, nosoratan'i Julia Franz ary novokarin'i Angilee Shah, dia niseho voalohany tao amin'ny PRI.org ny 7 Oktobra 2016. Naverina navoaka eto ho anisan'ny fifanarahana fifampizaràna votoaty
Amin'ireo Latino eo amin'ny 27,3 tapitrisa any Etazonia izay afaka hifidy amin'ireo fifidianana ny taona 2016, vinavinaina ho ny atsasak'ireo ihany — 13,65 tapitrisa — no tena hifidy.
Vao haingana, niteny tao amin'ny vovonana Latino firesahana ny fifidianana any Arizona ao amin'ny Global Nation, ny tetikasa PRI maneho ireo tantara tena marin'ireo mpifindra monina any Etazonia, nilaza i Antonio Valdovinos fa tsy mahatsapa ho tafiditra amin'ny rafitra politika ireo Latino mpifidy eo amin'ny faritra. Ary nandany fotoana be niresaka tamin'ireo mpifidy i Valdovinos, satria izy no namorona ny La Machine Field Operations, izay miasa mba hampandany ireo kandidà liam-pivoarana ao Arizona sy any rehetra any.
Vao haingana, niresaka taminà tovovavy 18 taona i Valdovinos, izay niteny taminy fa tsy nieritreritra ny hifidy izy satria tsapany fa efa “voafaritra mialoha” ny ho filoha. Mahavaky fo, hoy izy, io karazana tsy fananana fientanentanana io. “Hevitra tena mahomby io mba hanakànana ny tanora tsy handray anjara.”
Ao amin'ny La Machine, misy tafika-nà mpirotsaka an-tsitrapo sy mpikarakara maro mitady ny fomba rehetra hanentanana ny olona hifidy — mandrakitra ireo mpifidy, miantso ireo afaka mifidy, ary na dia, araka ny vohikalany, manangona karatra postaly-nà fanomezan-toky hifidy any aminà fampisehoana.
Saingy rehefa tonga tokoa ny Andro Fifidianana ny volana Novambra, na i Valdovinos aza tsy handeha hifidy — tsy manome fahafahana azy hanao izany ny sata maha-mpifindra monina azy. Teraka tany Colima, Meksika, ary nentina tany Etazonia fony izy 4 taona, lehibe tany Phoenix, Arizona, tsy nanana taratasy ara-dalàna i Valdovinos. Taorian'ny nahazoany ny diplaomany tamin'ny ambaratonga faharoa, naniry ny hiditra ho Marines izy.
“Ny mba ho ao amin'ny Marines Amerikana ary hanompo ity firenena ity no nofinofiko,” hoy izy. “Nianiana ny tsy hivadika aho hatramin'ny kilasy garabola.”
Fa rehefa feno 18 taona, raha nanandrana ny niditra ho Marines i Valdovinos, nasaina niverin-dàlana izy; anisan'ny taranaka tanora tsy nanana taratasy izy, na “Mpanonofy,” any Etazonia, izay nahemotra aloha ireo fanantenany hanana fonenana ara-dalàna sy ny làlany mankany amin'ny maha-olom-pirenena rehefa tsy lany tao amin'ny Senat ny taona 2010 ny Dream Act.
Mety hoe hevitra hafa ihany koa ny kolejy. Fa nefa nandrara ireo mpianatra tsy nanana taratasy tsy hahazo vatsim-pianarana avy amin'ny fanjakana i Arizona araka ny Volavolan-dalàna 300, izay lany tamin'ny taona 2006. Taminà andrana ho an'ny Latino Giant, fikambanana iray izay manome tohana fampaherezana ho an'ireo Latino ao Etazonia, nanoratra i Valdovinos hoe “vantany vao fantatro fa mety tsy ho afaka handeha amin'ny kolejy aho, tonga dia lasa tafiditra tamin'ny resaka politika aty amin'ny tanànako, tamin'ny fampielezankevitry ny filankevitry ny tanàna ao amin'ny distrika Faha-5.” Nalaza be tamin'izany fampielezankevitra ny taona 2011 izany ilay Demokraty Daniel Valenzuela, ary nahatonga fitomboana dimy avo heny amin'ny fandraisana anjaran'ny Latino mpifidy ilay fanentanana.
Voapaingotra i Valdovinos. Nanao fampielezan-kevitra ho an'ireo kandidà Demokraty maromaro kokoa izy, isan'izany ny fahombiazana azon'i Kate Gallego, tamin'ny filankevitry ny tanànan'i Phoenix atsimo tamin'ny taona 2013 ary ny fampielezankevitry ny vadiny, Ruben Gallego, tamin'ny kongresin'i Arizona ny taona 2014, izay niasan'i Valdovinos ho talen'ny fampielezankevitra.
Ny taona 2012, nandany hetsika tonga dia nampiharina ny fitantanan-draharahan'i Obama, nomena anarana hoe Deferred Action for Childhood Arrivals, na DACA (raharaha miandry ho an'ireo tonga nandritry fahazazana) Manome fahafahana ho an'ireo mpifindra monina tsy manana taratasy izay niditra tao Etazonia fony fahazaza, toy an'i Valdovinos, hiasa ara-dalàna eto ilay politika.
“Ohatra velona amin'ny vokatry ny hetsika aho,” hoy Valdovinos. “Nahazo ‘raharaha miandry’ aho, DACA, avy tamin'ny Filoha Obama, izay namela ahy hanana ny asako voalohany, nanomboka nandoa hetra, ary nanomboka ny orinasako manokana, izay mampiasa olona maherin'ny 40 ankehitriny.”
La Machine io orinasa io. Ary ao Arizona sy manerana an'i Etazonia, misy asa afaka atao.
“Ny tena asa eo an-tànana ankehitriny izao dia ny hahazo olona maro kokoa hiditra anatin'ilay dingana, mba hifidy olona tsaratsara kokoa ho ao amin'ny birao,” hoy i Valdovinos.
Niteny tao amin'ny resadresaky ny Global Nation i Antonio Valdovinos, niaraka novolavolain'ny PRI sy ny BBC World Service, izay natao tany Phoenix ny 4 Oktobra.